I-china lady colorful vala izinzipho zezimvu ifektri kanye nabaphakeli | Yiruihe
ILady Colourful Close Toe Sheepskin Slipper
Umbala ogqamile uzothatha "okugqamile" okuningi ebusika obubandayo. Futhi umbala ogqamile ohlukahlukene uzovumela ogqokile ukuthi abe nezinketho eziningi. I-Colorful & Warm, ingahlala futhi.
Phezulu: Isikhumba semvu
Ngemuva kokusebenza kosuku olunzima, iziliphu zesikhumba semvu ezithambile nezintofontofo kuyindlela engcono yokuphumula. Uboya bemvelo, obunempilo nobuphefumula kahle, Buzonikeza izinyawo zakho ikhefu eliphelele ezithendeni eziphakeme nezinto zokwenziwa. Futhi inkampani yaseYirui United isebenzisa uboya bezimvu obuthunyelwe ngaphandle e-Australia okukhiqizwa kwama-slippers woboya kungukukhetha kwakho okuhle.
Le Lady Colourful Close Toe Sheepskin Slipper yenziwa nge-A-class Sheepskin yase-Australia phezulu nasezindongeni. Ihlala isikhathi eside ngokwedlulele futhi izogcina izinyawo zakho zifudumele futhi zikhululekile ngaso sonke isikhathi.Noma ngabe usebenza ekhaya noma uthatha iposi, lolu hlobo lwama-slippers luzokwenza uzizwe ukhululekile futhi womile. Ulwelwesi oluhle, oluminyene, olusezingeni eliphakeme lwase-Australia lwe-Sheepskin luqinile ngonyawo futhi luyakhululeka ngisho naphakathi kwezinzwane, ezingatholakali kunoma iyiphi enye into enamakhemikhali e-fiber. Ngokuqinisekile kuyisinqumo sokuqala sabesifazane besimfashini basebusika abashibilika endlini.
Futhi isikhumba semvu si-hygroscopic kangangokuthi kuhle ngisho nasezinyangeni ezijulukayo zasehlobo ukugcina izinyawo zakho zintsha futhi zomile ngaso sonke isikhathi. Lokhu kungenxa yokuthi kukhona ungqimba lwefayibha phakathi kwesikhumba semvu, esigcina izinga lokushisa lingaguquguquki unyaka wonke, futhi kusiza nokuvimbela igumbi ukuthi lingabandi kakhulu, ngokwesibonelo, lapho i-air conditioner isebenza ehlobo.
Okuwukuphela kwalo kwenziwa ngenjoloba, i-anti-slip nokuvikela ukumelana nokugqoka, okwenza kukhanye futhi kuphephe ukugqokwa.
Ngenkathi abantu abaningi bekhetha imihlobiso ebizayo, izigaxa zoboya zingakhombisa ukunambitheka komuntu kweqiniso.
Ama-slippers ezimvu zezimvu nawo ayisipho esihle sokuthumela uthando olufudumele kubangani nomndeni wakho.
Langaphambilini I-Lady Classic Cuff Sheepskin Slipper
Olandelayo: I-Lady Colourful Open Toe Sheepskin Slipper
Ama-Lady Cuff Wool Moccasins
AmaMoccasin Amadoda Ezimvu
Abesilisa Vala Uzwane Isigaxa Slipper